အလုပ်လုပ်ပြီး ကြိုးစားရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ သိန်းပေါင်းထောင်ချီတန်တဲ့ ကားကြီးကို ၀ယ်ယူလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ နေခြည်ဦးကတော့ ယခုဆိုရင် အနုပညာလောကရဲ့ တက်သစ်စမင်းသမီးတွေထဲမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင် ကျော်ကြားနေတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။နေခြည်ဦးဟာ ရုပ်ရည်ချောမောလှပရုံသာက ထက်မြက်တဲ့သူလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အလှူအတန်းတွေမှာလည်း သဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာလှူဒါန်းပြီး အလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာ လှူဒါန်းတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီကနေ့ မှာလည်း နေခြည်ဦးက သူမကိုယ်တိုင် ရှာဖွေထားတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ ကားအသစ်ကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အကြောင်း Vlog အသစ်လေး ကို အခုလိုပဲ ချပြလာပါတယ်။နေခြည်က“New Year, New Car, New Adventure !!! ဒီ Vlog လေးက နေခြည့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Car Shopping Vlog လေးပေါ့နော် … 🚘 အခုဝယ်မယ့်ကားက နေခြည့်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ ပထမဦးဆုံးဝယ်မယ့် ကားလေးလည်းဖြစ်လို့ နေခြည် မှန်းထားတဲ့ Budget နဲ့ ဘယ်လိုကားမျိုးရမလဲဆိုတာလည်း အရမ်းရင်ခုန်နေတယ်။ 🥰🥰နေခြည် ငယ်ငယ်လေးထဲက ကားတွေဆို အရမ်း Crazy ဖြစ်တယ်။နေခြည် ကျောင်းသွားတက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ နေခြည်စီးဖို့ဆိုပြီး ဖေဖေက ကားလေးတစ်စီးဝယ်ပေးတယ်။ အဲ့တုန်းကဆို နေခြည် အရမ်းပျော်တာ။ ဘဝမှာ ပထမဆုံးရတဲ့ကားလည်း ဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် တစ်ယောက်ထဲလည်း စီးရမှာဆိုတော့။”
“အခု နေခြည် အသက်အရွယ်တစ်ခု ရောက်လာတဲ့ အခါကျတော့ မိဘကို ပူဆာတာထပ် ကိုယ့်ဘာသာရှာတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးလောက် လိုချင်လာပြီ။ဖေဖေနဲ့ မေမေကိုလည်း ဒါ သမီးပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်ထားတာဆိုပြီး ကြွားချင်တာလည်းပါတာပေါ့လေ 😛 အဲ့တာကြောင့် နေခြည်3နှစ်ကျော်4နှစ်နီးပါး အလုပ် အလုပ် အလုပ် ဆိုပြီး တောက်လျှောက်လုပ်ပြီး ရှာထားတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ကားတစ်စီးလောက်တော့ ဝယ်တော့မယ်ကွာလို့ နေခြည် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။”ဆိုပြီး တင်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။
နေခြည်ဦး ကတော့ သူမအလုပ် စလုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန် ကတည်းက ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ (၄) နှစ်နီးပါး ရှာဖွေလာတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ သိန်း (၂၈၉၀) တန် Range Rover ကားအသစ်ကြီးကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီး လည်း ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ပြီး ဒီလိုမျိုး အဖိုးတန် ကားသစ်ကြီးကို ဝယ်နိုင်ခဲ့တာ အားကျစရာ ပါပဲနော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အလုပျလုပျပွီး ကွိုးစားရှာထားတဲ့ ပိုကျဆံတှနေဲ့ သိနျးပေါငျးထောငျခြီတနျတဲ့ ကားကွီးကို ဝယျယူလိုကျတဲ့ နခွေညျဦး
ပရိသတျကွီးရေ နခွေညျဦးကတော့ ယခုဆိုရငျ အနုပညာလောကရဲ့ တကျသဈစမငျးသမီးတှထေဲမှာ လြှမျးလြှမျးတောကျအောငျမွငျ ကြျောကွားနတေဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျနျော။နခွေညျဦးဟာ ရုပျရညျခြောမောလှပရုံသာက ထကျမွကျတဲ့သူလေးတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။အလှူအတနျးတှမှောလညျး သဒ်ဒါတရားထကျသနျစှာလှူဒါနျးပွီး အလှူရစေကျလကျနဲ့မကှာ လှူဒါနျးတတျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျနျော။
ဒီကနေ့ မှာလညျး နခွေညျဦးက သူမကိုယျတိုငျ ရှာဖှထေားတဲ့ ငှကွေေးတှနေဲ့ ကားအသဈကွီးကို ဝယျယူခဲ့တဲ့ အကွောငျး Vlog အသဈလေး ကို အခုလိုပဲ ခပြွလာပါတယျ။နခွေညျက“New Year, New Car, New Adventure !!! ဒီ Vlog လေးက နခွေညျ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Car Shopping Vlog လေးပေါ့နျော … 🚘 အခုဝယျမယျ့ကားက နခွေညျ့ကိုယျပိုငျဝငျငှနေဲ့ ပထမဦးဆုံးဝယျမယျ့ ကားလေးလညျးဖွဈလို့ နခွေညျ မှနျးထားတဲ့ Budget နဲ့ ဘယျလိုကားမြိုးရမလဲဆိုတာလညျး အရမျးရငျခုနျနတေယျ။ 🥰🥰နခွေညျ ငယျငယျလေးထဲက ကားတှဆေို အရမျး Crazy ဖွဈတယျ။နခွေညျ ကြောငျးသှားတကျပွီးပွနျလာတဲ့အခြိနျမှာ နခွေညျစီးဖို့ဆိုပွီး ဖဖေကေ ကားလေးတဈစီးဝယျပေးတယျ။ အဲ့တုနျးကဆို နခွေညျ အရမျးပြျောတာ။ ဘဝမှာ ပထမဆုံးရတဲ့ကားလညျး ဖွဈတယျ၊ ကိုယျ့စိတျကွိုကျ တဈယောကျထဲလညျး စီးရမှာဆိုတော့။”
“အခု နခွေညျ အသကျအရှယျတဈခု ရောကျလာတဲ့ အခါကတြော့ မိဘကို ပူဆာတာထပျ ကိုယျ့ဘာသာရှာတဲ့ ပိုကျဆံနဲ့ ဝယျထားတဲ့ကားတဈစီးလောကျ လိုခငျြလာပွီ။ဖဖေနေဲ့ မမေကေိုလညျး ဒါ သမီးပိုကျဆံနဲ့ ဝယျထားတာဆိုပွီး ကွှားခငျြတာလညျးပါတာပေါ့လေ 😛 အဲ့တာကွောငျ့ နခွေညျ3နှဈကြျော4နှဈနီးပါး အလုပျ အလုပျ အလုပျ ဆိုပွီး တောကျလြှောကျလုပျပွီး ရှာထားတဲ့ပိုကျဆံနဲ့ ကားတဈစီးလောကျတော့ ဝယျတော့မယျကှာလို့ နခွေညျ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။”ဆိုပွီး တငျပွထားတာကိုတှရေ့ပါတယျနျော။
နခွေညျဦး ကတော့ သူမအလုပျ စလုပျခဲ့တဲ့ အခြိနျ ကတညျးက ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ (၄) နှဈနီးပါး ရှာဖှလောတဲ့ ငှကွေေးတှနေဲ့ သိနျး (၂၈၉၀) တနျ Range Rover ကားအသဈကွီးကို ဝယျယူခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီး လညျး ငယျငယျလေးနဲ့ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါ ကိုယျရပျတညျပွီး ဒီလိုမြိုး အဖိုးတနျ ကားသဈကွီးကို ဝယျနိုငျခဲ့တာ အားကစြရာ ပါပဲနျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။